Warshadaha kiristaalo aan tooska ahayn - Shiinaha Soo -saareyaasha kiristaalo aan tooska ahayn, Alaab -qeybiyeyaasha
Hababka koritaanka oo ay ku jiraan kuwo siman iyo kuwo toosan, agabkan (ZnGeP2, AgGaS2, AgGaSe2, GaSe, KTA, KTP, BIBO, LBO, BBO) ayaa lagu heli karaa cabirrada iyo jihaynta caadiga ah. Qaar ka mid ah, oo leh astaamo isku-dheelitirnaan aan toos ahayn iyo cabbirro gaar ah oo aan bixinnay ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa SHG, THG iyo Mid-infrared OPO, nidaamyada OPA, iwm.
Gallium phosphide (GaP) crystal waa qalab indhaha infrared leh engegnaan dusha sare, conductivity kaamerada sare iyo gudbinta band ballaaran.
Zinc Telluride waa maaddo kiimiko ah oo ikhtiyaar ah oo leh qaaciddada ZnTe.
Cr²+: ZnSe nuugiyaasha la isku halleyn karo (SA) ayaa ah agabyo ku habboon furayaasha Q-furayaasha ee fiyuus-il-badbaado leh iyo lasers-state-ka adag ee ka hawlgala baaxadda muuqaalka ee 1.5-2.1 μm.
Kiristaalo ZGP oo leh isku-duwayaal waaweyn oo aan toos ahayn (d36 = 75pm/V), baaxad ballaaran oo hufan oo infrared (0.75-12μm), kuleyl aad u sarreeya (0.35W/(cm · K)), xadka dhaawaca leysarka sare (2-5J/cm2) iyo Hantida si fiican u farsameysan, crystal ZnGeP2 waxaa loogu yeeraa boqorkii kiristaalo indho -indhayn ah oo infrared ah oo wali ah walxaha beddelka soo noqnoqda ee ugu wanaagsan ee awoodda sare leh, jiilka laydhka infrared -ka la hagaajin karo. Waxaan bixin karnaa tayo sare oo indhaha ah iyo dhexroor ballaaran oo kiristaalo ZGP ah oo leh isugeyn nuugid aad u hooseysa α <0.05 cm-1 (oo ku socota mowjadaha bamka 2.0-2.1 µm), kaas oo loo adeegsan karo in lagu soo saaro laser-ka la-beddeli karo ee dhexdhexaadka ah oo leh wax-qabad sare iyada oo loo marayo OPO ama OPA hababka.
AGS waa hufnaan laga bilaabo 0.50 ilaa 13.2 µm. In kasta oo isku -dheelitirnaanta aan tooska ahayn ee ugu liidata ay ka mid tahay kiristaalo infrared -ka la soo sheegay, daahfurnaanta dhererka dhererka dhererkiisu yahay 550 nm ayaa loo adeegsadaa OPO -yada ay soo riixdo Nd: YAG laser; kala duwanaansho fara badan oo isku -dhafan oo isku -dhafan oo leh diode, Ti: Sapphire, Nd: YAG iyo lasers dheeha IR oo daboolaya 3-12 µm; nidaamyada cabbirka tooska ah ee infrared -ka tooska ah, iyo SHG ee laser CO2. Taargooyinka khafiifka ah ee AgGaS2 (AGS) ayaa caan ku ah jiilka garaaca wadnaha ee ultrashort -ka ee badhtamaha IR iyada oo farqiga soo noqnoqoshada shaqaalaynta NIR hirarka.
AGSe Kiristaalo AgGaSe2 waxay leeyihiin cidhifyo kooxeed 0.73 iyo 18 µm. Baaxaddiisa gudbinta ee waxtarka leh (0.9–16 µm) iyo kartida is -waafajinta ballaadhan waxay siisaa fursad aad u wanaagsan codsiyada OPO marka lagu shubo noocyo kala duwan oo leysarka. Ku -hagaajinta gudaha 2.5–12 µm ayaa la helay markii lagu shubayo Ho: YLF laser at 2.05 µm; iyo sidoo kale hawlgalka is-waafajinta wajiga aan muhiimka ahayn (NCPM) gudaha 1.9–5.5 µm marka lagu shubayo 1.4-1.55 µm. AgGaSe2 (AgGaSe2) ayaa loo muujiyey inuu yahay kristal laba jibbaaran oo hufan oo shucaaca shucaaca CO2 infrared.